पाँच वर्षे बालकको तेस्रो गीत ‘राजा रानी’ सार्वजनिक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पाँच वर्षे बालकको तेस्रो गीत ‘राजा रानी’ सार्वजनिक
डिसी नेपाल , २८ माघ २०७४
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा सबैको आकर्षण बढदो छ । युवा पुस्तामात्र होईन्, बालकदेखी बृद्धसम्मलाई नै गीतसंगीत क्षेत्रले आकर्षित गर्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ प्रतिभावान कलाकारहरु यो क्षेत्रमा भित्रिदै गएका छन् ।
ए आर बुढाथोकी पनि गीतसंगीत क्षेत्रमा अघि बढदै गरेका बाल गायक हुन । भर्खरै पाँच वर्ष पुगेका बुढाथोकीको तेस्रो गीत भर्खरै बजारमा आएको छ । यसअघि ‘गुल्टियो झिल्के’ र ‘कसरी कसरी’ गाएका यि बाल गायकको तेस्रो गीत ‘राजा रानी’ म्यूजिक भिडियोसहित सार्वजनिक भएको हो ।
टंक बुढाथोकीको संगीत, चन्द्र मगरको शब्द रहेको गीतको भिडियोमा वाल कलाकार नाम्साङ, विपाशा, सोनिक, बर्षा, निशा, रितु, स्मृति, युविन र आश्विनीले अभिनय गरेका छन् । ‘डि मेलोडिक्स क्रु’ ले निर्माण गरेको भिडियोलाई बिमल पाठकले निर्देशन गरेका हुन । भिडियोको कोरियोग्राफर अरुण श्रेष्ठ र सुनिद मानन्धर हुन ।
प्रवेश पोख्रेलको छायाँकन रहेको भिडियोलाई सुरेश श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन ।